Inaan iska fiirsado faraxooda ayaan jeclaystay. Kadib ayay bilowday inay eed dusha uga tuurto Cumar ayada oo ku eedaysay inuu iska indhatiray dhibka haysta iyada iyo caruurteeda. Markii ay tageen gurigii ayuu Cumar rc digsi ka buuxiyay raashin, ilaa uu ka bislaado, hadana u soo riday caruurtii, iyaga oo ka dhargay isla markiina bilaabay cayaar. Albaabka ayuu tegey oo ku garaacay, dadkii guriga ku jirey markay ogaadeen inuu Cumar yahay ayaa Khabaabna dhuuntay, gabadhiina waraaqihii qur’aanku ku yiilley xaseysey qarisay. Markii la dagaallamay oo nabarro la is gaarsiiyey, la iskuna xanaaqay ayey dheheen “waxaad doonto samee annagu Ilaah ayaannu rumeyney waannuna islaamnay”. Khabaab oo dhuumanayey ayaa markuu maqlay hadalka Cumar iyo siduu u soo dabcay ayuu soo baxay oo ku yiri “Cumarow waxaan rajaynayaa iney kugu dhacday ducadii Rasuulka SCW kolkuu lahaa “Ilaahow laba Cumar Cumar binu Khadhaab iyo Abii-jahal midkaad kheyr ku og tahay islaamka ku xooji”.
Sidoo kale wuxuu Cumar yiri “waxaan is weydiiyey ninka ugu warqaadka badan reer Makka oo dadka oo dhan hadalka gaarsiin kara, waxaan xasuustay inuu yahay Sumeyn ibnu Camar al-juhani”, markaasaan u tegay oo ku iri “waan islaamay ” markaasuu u qeyliyey isagoo leh “Cumar ibnu Khadhaab waa iishay” Cumarna wa ka daba hadlay isagoo leh “ma iilane waan islaamay”. Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. Wakhtigani waxaa dhacday khilaaf aad u wayn oo dad badan ayaa diinta Islaamka dib uga noqdey maadaama nebigii waxyigu ku soo dagayay geeriyooday. Markaas ayuu arkay haweenay iyo caruurteeda oo oynaya, iyo digsi dabka saran. Gaajo inay hayso ayay u sheegtay Amiirka. Waxaa kale oo Cumar sameeyey markuu islaamay ayuu Rasuulka SCW ku yiri “Rasuulkii allow sow xaq kuma taagnin, waa inaan baxnaa oo dhammaanteen aan kacbada ku soo tukannaa”, Rasuulkuna SCW waa ka yeelay, markaasaa waxaa soo baxay asxaabtii oo laba saf ah oo safna Cumar ku jiro safna Xamsa.
Fatima bint al Khattab. D ilaa C. Albaabka ayuu tegey oo ku garaacay, dadkii guriga ku jirey markay ogaadeen inuu Cumar yahay ayaa Khabaabna dhuuntay, gabadhiina waraaqihii qur’aanku ku yiilley xaseysey qarisay.
Allaah wuxuu u soo hooyey dadkii muslimiiinta ahaa cissi waxayna bilaabeen in waxyaalo badan oo ay la dhuuman kkhadaab ay bannaanka soo dhigaan siduu Bukhaari ka weriyey Cabdullaahi ibnu Mascuud inuu yiri “kama aannaan suulin cissi intuu Cumar islaamay”. Cumar Amiir al-Mu’miniin ingiriis: Wakhtigani waxaa dhacday khilaaf aad u wayn oo dad badan ayaa diinta Islaamka dib uga noqdey maadaama nebigii waxyigu ku soo dagayay geeriyooday.
Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Inaan iska fiirsado faraxooda ayaan jeclaystay.
Kadib ayay bilowday inay eed dusha uga tuurto Cumar ayada oo ku eedaysay inuu iska indhatiray dhibka haysta iyada iyo caruurteeda. Qureysh talo ayaa ku caddaatay bnu ka caroodeen waxyaalaha uu Cumar sameeyey, waxay markaa ku tashadeen ineyba dilaan hase yeeshee waxaa arrintaa is hor taagay Cumarna gaarsiiyey Caas ibnu Waa’il.
Al-Masjid al-NabawiMedina. Cumar isla markiiba wuxuu qaadey tallaabooyin wuxuuna yri “waxaan is weydiiyey ninka dadka ugu neceb islaamak markaasaan xasuustay inuu Abii-jahal yahay, markaasaan gurigiisii ugu tegey oo ku garaacay, albaabka ayuu biju furay oo i soo dhoweeyey yirina “maxaad iigu timid Cumar”, waxaan ku iri “waxaan kuugu imid sommali ku ogeysiiyo inaan islaamay oo rumeeyey Alle iyo Rasuulka SCWwaxaan haysan jirneyna aan beeniyey”, Abii-jahal intuu naxay ayuu yiri “waxaad la timid baa xumaaday” gurigii buuna bin cararay.
Cumar Bin KHattab Musalsal Diini Ah.
Qaab adeegsi kale, eeg Cumar faah faahin. D 26 Dulhijjah 23 Hijriwuxuu ahaa saaxiibka labaad ee Nebi Muxamedhogaamiyihii sadexaad ee Dawladda Islaamkaasxaabi ka mid ah Kulafo Raashidiinta iyo mid ka mid ah asxaabta rasuulka. Cumar Kani waa maqaal ku saabsan Magaca Cumar. D Cusmaan binu Cafaan Wakhtiga Hogaanka: Aslam ayaa diiday asaga oo ka xishooday inuu Amiirka Khwdaab jawaan buuxo dhabarka u saaro.
Daawo Musalsalkii Cumar Binu Khadab Xalqadiisi Kowaad. – Sayruuq News
Kadib ayuu haweenaydii waydiiyay waxa keenay oohinta caruurta. Muuqaalka Akhri Wax ka bedel Wax ka bedel xogta Itusi taariikhda.
Hadii aad wax ka taqaanid fadlan ku caawi Wikipedia in aad Wax ku dartid. Waa inaan aniga xanbaaro jawaankan maadaama Maalinta Qiyaamo aniga la I waydiin doono. Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay Biyo caruurta lagu sasabo ayaa saaran ayay ugu jawaabtay.
Cumar intuu durba aad isu beddelay oo Ilahay khadaah hanuun ku soo riday ayuu yiri “xaggee joogaa Nabigii? Hadaayey caruurtaan way ooyaysay, iminkana way qoslayaan oo cayaar ayay ku jiraan.
Intii nebigu noolaa, Cumar bin Khattab wuxuu ahaa saaxiibka iyo la-taliyaha labaad ee Nebi Muxamed asagoo kala qeyb galay arimo aad u badan. Abu Bakr Sadiiq Wakhtiga Hogaanka: Qoraalkaagu ha noqdo mid faa’iido leh oo dhexdhexaad ah. Cumar ayaa markaa aaday gurigii walaashii isagoo xanaaqsan, markuu gurigii irriddiisii soo marayo ayuu maqlay Qur’aan la akhrinayo waxaana guriga joogey walaashiis, ninkeedii iyo Khabaab oo qur’aan u akhrinayey.
Cumar gurigii ayuu galay, ka dibna halkaa ayuu ku soo islaamay. Markuu jawaankii buuxiyay ayuu ka codsaday Aslam inuu dhabarka u saaro. Cumar iyo Xamsa markay soo islaameen Ilaahay s. Cumar wuxuu ka mid ahaa raggii markii hore Islaamka iyo muslimiinta aadka u dhibi jirey, sanadkii lixaad ee soo diriddii Rasuulka s.
Intuu Aslam jaleecay ayuu yiri:.
CINEBARRE BOULDER MOVIE TIMES
YAWANG DRAMA RATING
IIYAK KA RIN JULIE VEGA MOVIE
FILM ONLINE CUCERITORUL EP 14
HOME CINEMA AIRIS L161
BANDHAN SAAT JANAMON KA EPISODE 4